यी व्यक्तिले भुलेर पनि नखानुहोस् दहि, यस्तो छ कारण – Jaljala Online
Posted on December 12, 2019 December 12, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
यस्तो अवस्था भएका व्यक्तिले भुलेर पनि खानुहुँदैन दही नत्र भने विष समान बन्न सक्छ। तर यसमा अन्य फाइदाहरु पनि हामीले यहाँ व्याख्या गरेका छौँ। जानौँ
दही स्वादिलो पेय हो र गुणकारी पनि। दही सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा अनेक लाभ मिल्छ। गर्मीमा दहीले तिर्खा पनि मेट्छ। तर, दही खाने समय र तरिकामा भने ख्याल गर्नुपर्छ।
दही स्वास्थ्यको लागि एकदमै फाइदाजनक चीज हो यसमा कुनै शंका छैन र यसको आफ्नै आयुर्वेदिक महत्व पनि छ। दहीमा प्रचुर मात्रामा क्याल्सियम हुन्छ जसले दाँत तथा मांशपेशीमा रहेका हड्डीहरुलाई बलियो बनाउनुका साथै पाचन प्रक्रियालाई समेत स्फूर्त बनाउने काम गर्दछ।
दही स्वाद र स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, सौन्दर्यका लागि पनि उत्तिकै उपयोगी मानिन्छ। नियमित दही खानाले रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने र पेटलाई शीतलता प्रदान गर्दछ।
तर दहीलाई सेवन गर्ने समय मिलेन भने मानिसको स्वास्थ्यमा हानी समेत पुर्‍याउने आयुर्वेदका विज्ञहरूले बताएका छन्। उनीहरूले दहीलाई जुन रुपमा खाए पनि ताजा खान सुझाव दिएका छन्।
कुन अवस्थामा कस्ता व्यक्तिले दही खानुहुँदैन
राति दही खाँदा पाचन क्रियामा गडबडी पैदा हुन्छ। यसलाई पचाउनका लागि इनर्जी बर्न गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। धेरै मानिसहरू राति खाएपछि सुतिहाल्छन्। यसले झन् समस्या हुन्छ।
राति दही सेवन गर्दा शरीरमा इन्फेक्सनको डर हुन्छ। यसले रुघा र खोकी लाग्न सक्छ। यसका साथै कतिपय अवस्थामा दही हानिकारक हुनसक्छ। वा त्यसले पोषण होइन, विषको काम गर्न सक्छ। जस्तो कि,
शरीरको कुनै भाग सुन्निएको छ भने राति दही कदापि खानु हुँदैन। यसले सुन्निएको झन् बढ्छ।
घडा वा जोर्नीको दुखाईबाट पीडित भएको अवस्थामा दही सेवन उपयोगी हुँदैन। अन्यथा यसले दुखाईलाई झनै बढाउँछ।
हामी दहीमा विभिन्न मिश्रण बनाएर सेवन गर्छौं, खासगरी डिजर्टको रुपमा। तर, थरीथरीका फलफूल दहीमा मिसाउँदा त्यो विषाक्त बन्न सक्छ।
दही खाने उपयुक्त समय बिहान हो। हात–गोडाको जलन, पेटको इन्फेक्सन, अपच, भोक नलाग्नु, कमजोरीका साथै अरु पनि थुप्रै समस्याहरू बिहान दही सेवन गर्दा ठीक हुन्छ। नास्तामा एक कचौरा दहीमा सक्खर मिलाएर खाँदा शरीरमा रगत बढ्छ।
यसमा यस्ता रासायनिक पदार्थ हुन्छन् जसले गर्दा यो दूधभन्दा चाँडै पच्छ पनि। अपच, कब्जियत, ग्यास जस्ता पेटको समस्या भोगिरहेका व्यक्तिलाई दही वा त्यसबाट बनेको लस्सी, मोही आदिको उपयोग गर्नु फाइदाजनक हुन्छ।
१. राति निद्रा नलाग्ने समस्या छ भने दैनिक खानाका साथ एक कचौरा दही सेवन गरौं।
२. दहीको नियमित सेवन शरीरका लागि अमृत समान मानिन्छ। यसले रगतको कमि तथा कमजोरी हटाउँछ। दूधले जब दहीको रुप लिन्छ, यसको सुगर एसिडमा बदलिन्छ। यसबाट पाचनमा मद्दत मिल्छ। भोक कम लाग्ने व्यक्तिहरुलाई दहीले एकदम फाइदा गर्छ।
३. दहीको मोही वा लस्सी बनाएर पिउँदा पेटको गर्मी शान्त हुन्छ। पेटमा गडबडी हुँदा दहीमा विीरे नुन हालेर खाँदा पनि फाइदा हुन्छ।
४. दहीमा मुटुको रोग, उच्च रक्तचाप, तथा गुदाको रोगहरुलाई बिसेक पार्ने गजबको क्षमता हुन्छ। यसले कोलस्ट्रोल बढ्नबाट रोक्छ र मुटुको धड्कनलाई ठीक राख्छ।
५. दहीमा क्याल्सियम अधिक मात्रामा पाइन्छ। यो हड्डीहरुको विकासमा सहायक हुन्छ। साथै, दाँत, ता नङलाई पनि बलियो बनाउँछ।
६. पायल्स रोगबाट पीडित व्यक्तिहरुले दिउसो भोजनपछि एक गिलास मोही पिउँदा फाइदा मिल्छ।
हाम्रो समाजमा श्रीमान् भन्दा श्रीमतीको उमेर कम हुन्छ । हामीकहाँ कुनै नव दुलाहका लागि दुलही खोज्दा तुलनात्मक रुपले कम उमेरकै खोजिन्छ । अर्थात दुलाहभन्दा दुलहीको उमेर कम हुनुपर्छ । पितृसतात्मक सोंच-चिन्तनले पनि यसमा काम गरेको हुनुपर्छ ।
केटीहरु स्वभावैले लजालु हुन्छन् । त्यसैले बाटो हिँडिरहेको कुनै पुरुष मन पर्‍यो भने उनीहरु खुलेर व्यक्त गर्न सक्दैनन् । चोरी-चोरी हेर्छन् । त्यसैले उक्त पुरुषले थाहै पाउँदैन कि कुन केटीले उसलाई मन पराइरहेकी छिन् ।
कति बेला गर्ने यौन सम्पर्क ? जानी राख्नुस
प्रत्येक व्यक्तिको लागि सम्भोग गोपनीय र निजी कुरा हो । प्रत्येकको सम्भोगमा आ–आफ्नै अनुभव र तरिका पनि हुन्छन् । तर पनि सामान्यतया सम्भोग चरम सुख प्राप्त गर्न केही ध्यान पुर्र्याउनु पर्छ । सम्भोग क्रिया थाल्नु भन्दा पहिले वातावरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
मधुरो उज्यालो, मधुर संगीत, सफा र चहकिलो कोठाले वातावरणलाई रमणीय तुल्याउन मद्दत पुर्र्याउँछ । सम्भोगक्रिया थाल्नुअघि नहाउने, दाँत माझ्ने एवम् उपयुक्त लुगा लगाउनु राम्रो मानिन्छ । सम्भोग क्रियामा स्पर्शको भाषा बढी प्रभावकारी हुन्छ । आफ्नो यौन साथीलाई कामोत्तेजित पार्न हातका औंला र जिब्रोको स्पर्शको सहारा लिनु बढी प्रभावकारी हुन्छ । औंलाले अनुहारमा, गर्दनमा र कानको पछाडि बिस्तारै स्पर्श गरेमा कामोत्तेजना बढ्छ । साथै बिस्तारै जिब्रोले मुखमा चुम्बन गर्दै गर्दनको पछाडि एवम् कानको लोतीमा स्पर्श गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ । यसले पनि कामोत्तेजना बढ्छ ।
आफ्नो यौन साथीको बिचार बुझेर त्यसलाई सम्मानगरी सकेसम्म प्राथमिकता दिने भावनाले सम्भोगक्रिया अगाडि बढाउन सकेमा सदैव सुखद हुन्छ, आनन्दित हुन्छ । यस्तो सम्भोगबाट चरम आनन्द पनि प्राप्त हुन्छ । यस्तो स्थितिमा दुई शरीर एक हुने मात्र होइन कि दुई आत्माको मिलन पनि हुन्छ ।
सम्भोग शुरुगर्नु अघि सदैव यसका सीमा, मर्यादा र नैतिक मान्यताहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । किनकी सामाजिक र नैतिक मान्यताविरुद्ध हुन गएको सम्भोगबाट आनन्द प्राप्त गर्नुको सट्टा जिन्दगीभरी कलंकित भएर परिवार र समाजमा तिरस्कृत हुनुको साथै कानूनी दृष्टिले अपराधी समेत ठहरिन्छ ।
पुरुषहरुको यस्ता १० गुणहरुप्रति महिलाहरु आकर्षित हुन्छन्
धेरै पुरुषहरु महिलाहरुलाई कसरी आकर्षित पार्ने भनेर सोचिरहेको हुन्छ । तर उनीहरुलाई सहि तरिकाहरु थाहा नहुन पनि सक्छ ।
महिलाहरुले कस्ता गुण भएका पुरुषहरुलाई मन पराउछन भन्ने विषयमा धेरैजसो पुरुषहरुले ध्यान दिएको पाइन्छ । महिलाको नजरमा पर्न र मन जित्नका लागि हरेक खालका प्रयास गरिरहेका हुन्छन् पुरुषहरु ।
यही विषयलाई ध्यान दिएर वैज्ञानिकको टोलिले महिलाहरुले पुरुषमा चाहने गुणका बारेमा अनुसन्धान गरेका छन् ।अनुसन्धानबाट बैज्ञानिकहरुले पुरुषबाट महिलाले चाहने १०गुण पत्ता लगाउन सफल भएका छन् । उक्त अध्ययनमा वास्तविक जीवनमा पुरुषबाट आश गर्ने व्यवहारलाई ध्यान दिएर अध्ययन गरिएको थियो । यस्तो छ पुरुषका १० गुण जसले महिलालाई हुरुक्कै पार्ने गर्दछ ।
१. दीर्घकालिन सम्बन्ध वा विवाह नै गर्ने महिलाहरु पुरुषको गुड लुक्सलाई खासै महत्व दिदैनन् । छोटो सम्बन्ध राख्न चाहने केटीहरु मात्रै सुन्दरतामा ध्यान दिन्छन् ।
२. हसाउने खालका र बुद्धिमान पुरुषलाई महिलाहरुले बढी महत्व दिन्छन् । सेन्स अफ ह्युमर भएका पुरुषहरु जीवनमा आए भने जिन्दगी रमाइलो हुने र हासिखेली जीवन विताउन पाइने महिलाहरुको धाराणा रहेको हुन्छ ।
३. नरम हृदय भएको र परोपकारी काम गर्न तत्पर हुने पुरुषप्रति महिलाहरु निकै आकर्षित हुन्छन् ।
४. आफ्नो उमेरभन्दा केही बढी उमेरको पुरुषसँग बैवाहिक सम्वन्ध कामय गर्न महिलाहरु बढी रुचाउछन् । आफूभन्दा केही बढी उमेरका पुरुष भएमा उनीहरु धेरैजसो काममा अनुभवी हुने उनीहरुको विश्वास छ ।
५. मिलेको दाह्री र जुँगा भएका पुरुषसँग महिलाहरु एकदमै आकर्षित हुने गर्दछ ।
६. जे कुरामा पनि सहमति जनाउने खालका पुरुषलाई धेरैजसो महिलाले रुचाउँदैनन् । सजिलैसँग उपलब्ध नहुने, कहिलेकाही अटेरी गर्ने पुरुषको स्वभावले पनि महिलालाई आकर्षित नै गर्ने गर्छ ।
७.जो पुरुष जनावरहरुसँग खेल्न रुचाउछन् त्यस्ता पुरुषहरुलाई महिलाहरुले असल प्रेमीको रुपमा लिएको हुन्छ ।
८.रातो रङ मिसिएको पोषाक मन पराउने पुरुषहरुप्रति महिलाहरु आकर्षित हुने गर्दछ
९. समस्यामा परेकाहरुलाई उद्धार गर्न तयार रहने र साहसिक काम गर्न रुचाउने पुरुषहरु महिलालाई मन पराउछन् ।
१०.लवाई खवाई र सम्पन्न व्यवहार देखिने पुरुषहरु महिलाको विशेष रोजाईमा पर्ने गर्दछ ।
कुन राशीका व्यक्तिले कस्तो पर्स बोक्दा राम्रो ? हेर्नुहोस्
जोतिषका अनुसार कुन्डलीमा यदी केही ग्रह दोष रहेको छ भने मानिसलाई पैसाको समस्या भोग्नु पर्ने हुनसक्छ । ग्रह दोषबाट टाढा रहनका लागि कयौं उपायहरु रहेका छन् । यी उपायहरुबाट ग्रह अनुसार अशुभ प्रभावहरुमा कमी आउन सक्नेछ । र, कयौं सकरात्मक फल पनि प्राप्त हुनेछ । हामीसँग जुनसुकै वस्तु हुन्छ ती सबै कुराको प्रभाव हाम्रो आर्थिक स्तरमा पनि पर्न सक्छ ।
पैसा राख्नको लागि पर्स सामान्यदेखि सबै व्यक्तिले बोक्ने गर्छन् । यदि पर्स राशीअनुसार राखियो भने धन सम्बन्धी कामहरुमा आएका समस्याहरु समाधान हुनसक्ने छन् ।
जान्नुहोस्, तपाइको राशी अनुसार कुन पर्स बोक्दा राम्रो
मेषः यो राशीका मानिसहरुले रातो पर्स वा मरुन रंगको पर्स बोक्दा राम्रो हुनेछ । यस राशीको श्वामी मंगल रहेको छ । र, मंगलको प्रिय रंग रातो हो ।
वृषः वृष राशीको स्वामी ग्रह शुक्र हो । अतः यस राशीका मानिसहरुले शुक्रसँग सम्बन्धीत रंग सेतो वा चम्कीलो सिल्भर रंगको पर्स बोक्नु लाभदायी हुनेछ ।
मिथुनः यस राशीका मानिसहरुको लागि हरियो रंग लाभदायी मानिन्छ । मिथुन राशिको स्वामी बुध हो । र, बुधको प्रिय रंग हरियो हुने गरेको मानिन्छ ।
कर्कटः यस राशीको स्वामी चन्द्र हो । चन्द्रको प्रिय रंग सेतो वा सादा रंग हुने गर्छ । अतः यस राशीका मानिसहरुले सेतो वा फिक्का रंगको पर्स बोक्नु लाभदायी हुने छ ।
सिंहः सिंह राशीको स्वामी सुर्य हो । सुर्यलाई उर्जाको प्रतिक मानिन्छ । यसको प्रिय रंग रातो, पहेलो र खैरो हो । अतः यस राशीका मानिसहरुले यही रंगको पर्स बोक्नु उचित हुने छ ।
कन्याः कन्या राशीको स्वामी बुध हो । बुध ग्रहको प्रिय रंग हरियो हुनेगर्छ । अतः यस राशीका मानिसहरुले हरियो रंगको पर्स बोक्नु फाइदाजनक हुनेछ ।
तुलाः यस राशिका मानिसहरुले सेतो रंग वा चम्कीलो रंगको पर्स बोक्नु लाभदायी हुने छ । तुला राशीको स्वामी शुक्र हो । र, यो सबै शुक्रको प्रिय रंग हो ।
वृषः वृष राशीको स्वामी मंगल हो । मंगलको प्रिय रंग कलेजी रंग हो । अतः यस राशीका मानिसहरुले कलेजी रंगको पर्स बोकेमा लाभदायी हुनेछ ।
धनुः धनु राशीको स्वामी ग्रह बृहस्पति हो । देव गुरु बृहस्पतिको प्रिय रंग पहेलो हो । अतः यस राशीका मानिसहरुले पहेलो रंगको पर्स बोक्नु लाभदायी हुनेछ ।
मकरः मकर राशीका मानिसहरुले निलो अथवा कालो रंगको पर्स बोम्नु फाइदा जनक हुनेछ । यस राशीको स्वामी शनि हो । शनिको प्रिय रंग निलो र कालो हो ।
कुम्भः जुन मानिसहरुको राशी कुम्भ रहेको छ, उनीहरुले निलो, कालो वा कुनै गाडा रंगको पर्स बोक्नु लाभदायी हुनेछ । यस राशीको स्वामी शनि हो । र, यस प्रकारको रंग शनिको प्रिय रंग हो ।
मिनः मिन राशिको ग्रह स्वामी गुरु हो । गुरुको प्रिय रंग पहेलो हो । अतः यो राशीका मानिसहरुले पहेलो रंगको पर्स बोक्नु अत्यन्त सुभदायी हुने छ ।
यसरी राशीअनुसार पर्स बोकेमा तपाइको पर्समा पैसाको कमी हुने छैन् । यस्तै तपाइले पैसाको विषयमा कुनै समस्या पनि भोग्नु पर्ने हुने छैन् ।
पेट बढेर हैरान हुनुहुन्छ ? कसरी घटाउने ? अपनाउनुस यस्ता १० टिप्स
मोटोपना हरेक मानिसको समस्या बनिरहेको छ | यो समस्यालाई कम गर्न मानिसहरु घटक औषधिको प्रयोग गर्न समेत पछी नपर्ने गरेको पाइन्छ | तर हामीले यहाँ केहि घरेलु उपायहरु दिन गइरहेका छौ जसले तपाइको पेट घटाउन र मोटोपना घटाउन मद्दत गर्छ | हेर्नुस यी १० टिप्स:-
१. यदि तपार्इंलाई पेटको कुनै रोग छैन भने बिहान उठ्नेबित्तिकै मनतातो पानीमा कागतीको रस राखेर पिउँदा पेटको बोसो घट्छ । यसले मेटाबोलिजम दुरुस्त रहन्छ र तौल कम गर्न पनि मद्दत मिल्छ ।
५. खाना खाँदा उमेरको पनि ख्याल गर्नुहोला । बढ्ने उमेरमा खानाको आवश्यकता बढी पर्छ । यदि ४० वर्ष पार गर्नुभएको छ भने चिकित्सक वा डाइटिसियनको सल्लाहअनुसार खाना खानु राम्रो हुन्छ ।
६. बिहानको खाना धेरै खादा फरक पर्दैन ।
७. खानामा फल र सागसब्जी खानुहोस् । बिहान–बेलुकी एक कचौरा फल र सागसब्जी खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । यसबाट पेट भरिन्छ र एन्टीअक्सिडेन्ट, खनिज र भिटामिन पनि प्राप्त हुन्छ ।
१०. नियमित अन्तरालमा पानी पिउनाले मेटाबोलिजम बढ्छ र शरीरबाट विषालु पदार्थ बाहिर निस्कनमा मद्दत गर्छ । यसबाट शरीर स्वस्थ रहन्छ ।
भित्री बस्त्रको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनैपर्छ यी ६ कुरा
पेन्टी कहिले बदल्नुपर्छ ? अक्सर यसबारे हामी उति ख्याल गर्दैनौ। अरु लुगा, जुत्ता आदि त समय समयमा वा फेसन अनुरुप बदल्छौं । तर, पेन्टी ?
यौन मानव जीवनको एक अभिन्न र निक्कै महत्वपूर्ण पाटो हो । दाम्पत्य जीवनमा यौनिक सन्तुष्टीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैले यौनका विषयमा बात्सायन देखि आधुनिक मनोबैज्ञानिकहरुले विभिन्न पुस्तक लेखेका छन् ।
कन्डमबिनै गर्भ नरहने गरि यौनसम्पर्क कसरी राख्ने ? यौन टिप्स
हाम्रो समाजमा बिबाह गरे पछी श्रीमान श्रीमती दुवैलाइ जति सक्यो चाडों सन्तान जन्माउनु पर्ने दबाव हुन्छ ।
कुनै कुनै परिवारमा पहिले कोहि नामर्द वा बाझोपन छ छैन भन्ने कुरा हेरेर नवबिबाहितलाइ चाडों बच्चा जन्माएर आफ्नो प्रजनन क्षमता प्रमाणित गर्नु पर्ने बाध्याता समेत रहेको पाइन्छ ।
पहिले पहिले गर्भ निरोधक उपाय अहिले को जस्तै बिकशित भैसकेको थिएन र नियमित यौन सम्पर्क पछी बच्चा नजन्मदा त्यसलाई बाझोपन कै अर्थमा लिइन्थ्यो । अहिले गर्भ निरोधक का अनेक उपाय अबलम्वन गरिने हुँदा ति कुराहरु सान्दर्भिक छैन ।
केहि समयको अन्तराल पछी जन्माउन नै गर्भ निरोधकका विभिन्न उपाय बिकशित भएका हुन तर यी विभिन्न उपायको प्रभावकारिता भने फरक फरक हुन्छ । इम्लानटको प्रभावकारिता ९९ .९५ प्रतिशत, कपरटिको ९९ .२० प्रतिशत छ भने तिन महिने सुइ को ९७ प्रतिशत छ ।
कन्डमको कुरा गर्दा नियमित रुपमा सहि तरिकाले प्रयोग गर्दा यसको प्रभाव कारिता ९८ प्रतिशत सम्म हुन सक्छ । तर सामान्य रुपमा प्रयोग गर्दा ८५ प्रतिशत सम्म देखिएको छ । बाह्य स्खलनको विधिलाई सहि ढंगले प्रयोग गर्दा यसको प्रभावकारिता ७३ प्रतिशत सम्म मात्र हुन्छ ।
अब विर्य स्खलन हुने लाग्यो भनेर राम्रो संग थाहा नपाउदा लिङ्ग झिक्न ढिलो भै विर्य योनी भित्रै या योनी खेत्रमा खस्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा पनि अबलम्बन गरिएको बिधि काम नलाग्ने भै दिन्छ । त्यस बाहेक उत्तेजनाको श्रोत जे सुकै भए पनि योन उत्तेजना भए पछि अलिकति रस लिङ्गको टुप्पमा देखिन्छ ।
यसमा सामान्यतया शुक्र किट हुदैँन । त्यसैले सामान्य अवस्थामा यो रस सम्पर्क बाट गर्भ रहदैन । तर कति पय अवस्थामा यदि केहि समय पहिले हस्त मैथुन गरेर वा योन सम्पर्क गरेर विर्य स्खलन गरेको भए गर्भ रहने सम्भावना ज्यादै रहन्छ ।
हतार गर्न हुँदैन कतिपय अवस्थामा तत्काल आफूलाई चाहना भयो भन्दैमा सेक्स गर्न हतारिन हुँदैन । पार्टनर यसका लागि राजी छ कि छैन भन्ने जानकारी राखेर मात्र सेक्स सम्बन्ध राख्न पर्छ । आनन्ददायी सेक्स सम्बन्धका लागि दुवैका तर्फबाट पूर्वतयारी आवश्यक छ ।
तपाइको उमेर अनुसार तौल कति हुनुपर्छ ? जान्नुहोस्
मेडिकल दुनियामा साधारणत: उमेर अनुसार तौल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । जस्तो कि कुनै महिला गर्भवती छन् भने उनको पेटमा बढ्दै गरेको बच्चा हप्ता अनुसार कति बिकास भईरहेको छ हेर्ने गरिन्छ, जब बच्चा जन्मन्छ तब पनि बच्चा कति महिनामा कति तौलको भयो र तौल अनुसार कति स्वस्थ छ भन्नेबारे विश्लेषण गरिन्छ ।
स्वस्थ रहनको लागि जति खाने कुराको ब्यालेन्स आवश्यक छ त्यतिनै जरुरी सरिरको तौल पनि ब्यालेन्समा हुनु स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिन्छ । हरेक उमेरको एक छुट्टै तौल हुन्छ जो बच्चा, किसोर-किसोरी वा जुनसुकै पुरुष वा महिलाको स्वास्थ्यको लागि ब्यालेन्समा राख्न आवश्यक हुन्छ । हुनुपर्ने जति तौल नभई कम वा बढी भएमा सरिर स्वस्थ छैन भन्ने बुझ्दा हुन्छ, यस्तो अवस्थामा कयौं अस्वस्थता वा समस्याहरु देखा पर्न थाल्छ ।
बिशेषगरि जन्मदादेखि १८ बर्षसम्मको मानिसमा सारीरिक तौलको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसैले यहाँ कुन उमेरमा औशत कति तौल हुँदा सरिरलाई राम्रो हुन्छ भन्ने बारेमा साझा सबाल अनलाइन मार्फत जानकारी दिने प्रयास भएको छ ।
१. भर्खर जन्मिएको बच्चा छोरा हो भने उसको तौल कम्तिमा पनि ३.३ केजी वा सो भन्दा माथि हुनुपर्छ भने छोरी हो भने ३.२ केजी भन्दा माथि हुनुपर्छ । जन्मिँदा बच्चाको तौलबारे धेरै चर्चा हुनुको कारण स्वस्थता नै हो । राम्रो तौल लिएर जन्मिएको बच्चा हुर्काउन सहज हुन्छ भने जन्मिँदानै कम तौल भएको बच्चालाई जोगाउन मुश्किल हुन्छ ।
२. यदी ३ देखि ५ महिनाको बच्चा हो भने उसको औशत तौल छोरा हो भने ६ केजीभन्दा बढी वा छोरा हो भने ५.४ केजीसम्म हुनुपर्छ । यदी औशत तौल भन्दा कम भएमा आमाले बिशेष पौष्टिक आहार तथा बच्चाको स्याहार सुसारमा ध्यान दिनु पर्दछ ।
३. यदी ६ देखि ८ महिनाको छोरा हो भने उसको तौल कम्तिमा ७.८ केजी हुनुपर्छ भने छोरीको तौल ७.२ वा सो भन्दा बढी हुनुपर्छ । तौलको कमिको कारण रोगले आक्रमण गर्ने, बढी बिरामी हुने खाना नपच्ने जस्ता अनगिन्ती समस्या आउनेगर्छ । समस्या बल्झिएपछी जति ध्यान दिँदा पनि समस्या समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ त्यसैले बच्चाको उमेर अनुसार तौल औशतमा राख्नुपर्छ ।
१३. अब छोरा ११ बर्षको छ भने उसको उमेर ३२.२ केजी छ भने छोरीको औशत तौल २२.७ केजी हुनुपर्छ ।
यहाँ हामीले १८ बर्षसम्मको उमेरमा हुने औशत तौल बारे जानकारी दियौं । नेपालीहरुको १८ बर्षदेखि माथि ४० बर्षसम्मको औशत तौल ६० देखि ८५ सम्म हुनु स्वस्थनै मानिन्छ । कसैको सारीरिक बनौट अनुसार तौल बढी हुनु अस्वस्थ भन्न मिल्दैन तर अस्वभाविक मोटाउनु, पेट लागेर तौल बढ्नु, हिड्दा वा कुनै काम गर्दा छिटो थाक्नु जस्ता अवस्थामा अस्वस्थता हुन सक्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा खानपान र ब्यायाममा ध्यान दिनुनै उपयुक्त हुन्छ
Posted on June 29, 2019 Author Jaljala Online
Posted on May 31, 2019 Author Jaljala Online
बालसिर्जना सानो बाबु न्याउरो अनुहार लगाएर आमाको काँधमा ढल्किरहेको थियो। हामी सामाखुसीको क्लिनिकमा बच्चाको डाक्टरको पालो कुरिरहेका थियौं। सानो बाबु र उनकी आमा पनि ५ नम्बरको ढोका अगाडि डाक्टरको पालो कुरिरहनु भएको थियो। यो खबर प्रणय सिग्देलले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् । एकैछिनमा डाक्टर आउनुभयो। उनीहरूको पालो आयो। उनीहरू लगत्तै मेरो पनि पालो आयो। आमा […]
बिहे गरी अस्ट्रेलिया पठाएकी श्रीमतीबाट फिल्मी शैलीमा धोका, घट्यो यस्तो अचम्मको घटना [नालीबेली]